USuku International of Ikhutshaziwe Abantu lugujwa Disemba 3. Ngokwezibalo kabi 10% labantu emhlabeni uhlushwa isifo ezaholela ukukhubazeka, futhi cishe 650 million abantu. Injongo Usuku Ikhutshaziwe Abantu kuyinto ukuheha baqaphelise umphakathi ngokungabi inkinga ekhona, ukuze silondoloze isithunzi sabantu, amalungelo nenhlalakahle yabo. Lolu suku kwaba computerization sabantu, okuhloswe ngaso ekuqwashiseni izinzuzo ongaletha ukuhlanganiswa kwabantu abanokukhubazeka ezicini ezihlukahlukene zokuphila.
Iqhaza eNhlangano yeziZwe
Ngeshwa, abantu abaningi abanokukhubazeka Namanje zibhekene nezinkinga letivimbela iqhaza ngokugcwele ekuphileni komphakathi, lophocelela kubo ukuba cishe ukuzihlanganisa nomphakathi. Emazweni asathuthuka, abantu abakhubazekile bavame bancishwa amalungelo abo ayisisekelo abantu ukuba ukudla, ukunakekelwa kwempilo, imfundo, ukuqashwa kanye nempilo yokuzalana. Kule ndaba, imisebenzi United Nations eliqondiswe ekuqinisekiseni ukuthuthukiswa kwamalungelo abantu abaphila nokukhubazeka: indlela labahlanganyela ngayo ukuphila kwawo ngokuqondene nezombusazwe, civil, ezenhlalo, ezomnotho kanye namasiko ngemibandela alinganayo nabanye izakhamuzi isimo. USuku International of Ikhutshaziwe Abantu - kungenye suku, uma kukhona isikhathi ukumemezela ngenkinga esidlangalaleni. Okwamanje, kukhona i-instrument ngamazwe zomthetho, ogama mission - ukuqinisekisa kuhlonyiswa kwetinhlangano abantu abakhubazekile isithakazelo sabo best. Lo mbhalo ubizwa ngokuthi "INgqungquthela Yamalungelo Lwabantu Abakhubazekile".
Indlela ubambe uSuku International of Ikhutshaziwe Abantu
Ukuze uqinisekise gxila izinyathelo ababezibheka futhi emnandi okuhloswe ngaso ukuqaliswa namazinga omhlaba kanye nezinkambiso abantu abakhubazekile ukuba babambe iqhaza ekuqhubeni woSuku ekhubazekile lomuntu bakhangwa kokubili zikahulumeni kanye nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni kanye iqhaza oyisibopho engxenyeni ezimele. Imisebenzi esemqoka ukuze zibe ingxoxo izinkundla nemikhankaso ulwazi ngaphambi futhi ngqo uSuku International of Ikhutshaziwe Abantu. ubunjalo onesizotha lomcimbi kungenziwa kuhlelwe futhi ihlelwe ezindaweni ezahlukene. Ngokuyinhloko, ziklanyelwe ukuba sikhangise futhi ukugqamisa iqhaza kwabantu abanokukhubazeka empilweni emphakathini.
Njengengxenye yalolu suku zonke kutawubhekiswa okufaka izinyathelo ezingokoqobo ezokwenza ngcono ukusebenza ukuhambisana kwezinkambiso nemigomo ephathelene nabantu abaphila nokukhubazeka.
A umnikelo kubaluleke ngokukhethekile can abezindaba, okuyinto ukusiza ukuqhuba uSuku International of Ikhutshaziwe Abantu ne computerization esiphezulu wonke amaqembu abantu. Kodwa njengoba umthetho, abezindaba usazise mayelana nalolu daba unyaka, siphakamise imibuzo eshisa kakhulu futhi izixazululo. Ngokwesibonelo, uSuku International of Ikhutshaziwe Abantu 2013 International uNobhala-jikelele weZizwe Pan Gi Mun wamemezela kuvulwa ukufinyelela UN enkabeni e ekomkhulu layo, okubonisa ukuthi okwamanje esinye isinyathelo maqondana umphakathi kubantu abakhubazekile.
Sigubha Jewish New Year ngokuvumelana nemithetho